A gam akporo 10 ya na OxygenOS 11 kwudosiri ike na OnePlus 8 na 8 Pro | Gam akporosis
na OnePlus 8 na 8 Pro bụ smartphones nke ugbu a nke ika ahụ. Ndị a bịarutere n'oge ahụ, laghachi n'April nke afọ a, na sistemụ arụmọrụ nke gam akporo 10 n'okpuru OxygenOS 10, nke n'oge ahụ bụ ụdị kachasị ọhụrụ nke usoro nhazi nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ekwentị ndị a na-anabata mmelite ngwanrọ ọhụrụ ugbu a, nke na-abịa na gam akporo 11 n'okpuru OxygenOS 11, nke kachasị mma, ọ bụ nsụgharị siri ike. Cheta na ọnwa ole na ole gara aga, ọdụ abụọ ahụ kwesịrị ka gam akporo 11 dị n'ụdị beta.
Onye OnePlus 8 na 8 Pro nweta gam akporo 11 na OxygenOS 11
Ihe ngwugwu ohuru ohuru na agbakwunye akwa mkpuchi OxygenOS 11 na gam akporo 11 na-ebugharị na ikuku na ọnụọgụ ole na ole, ndị ọrụ a na-akọwaghị n'oge a, na mmejuputa sara mbara ga-amalite na ụbọchị ole na ole ma ọ bụrụ na onye nrụpụta China ahụghị njehie na nchinchi na ngwanrọ ahụ, ihe nke ndị ọrụ nwere ihu ọma na-enweta mmelite a ga-emekọ ihe ọnụ, ka e wee nwee ike ịmata ha karịa ọsọ na ngwọta.
Ndị ọrụ na-edeghị aha maka OTA a ekwesịghị ịda mba. Anyị na-atụ anya na tupu njedebe nke afọ a ga-enye mmelite ahụ na mpaghara niile ụwa. Ka anyị buru n'uche na e gosipụtara OnePlus na ụlọ ọrụ dịka otu n'ime ụdị ndị na-enye ngwa ngwa na nkwado kachasị mkpa ma a bịa n'ịnye mmelite ọhụrụ.
Mmelite ahụ chọrọ naanị ihe abụọ iji budata ma wụnye ya, ọ bụkwa ohere efu nke 3 GB na batrị a nwere ihe karịrị 30%. N'okpuru ebe anyị depụtara usoro mgbanwe zuru ezu na nke gọọmentị nyere site na mbinye aka nke OxygenOS 11 dabere na gam akporo 11 maka ọkọlọtọ OnePlus 8 na 8 Pro:
Ihe ngosi UI ohuru ohuru na-enye gi ahuhu di nro karie ihe nlere di iche iche.
Ntinye ihu igwe ọhụụ na-akwado mgbanwe dị egwu n'etiti ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ. Ugbu a ị nwere ike ịnwe ehihie na abalị na mkpịsị aka gị.
Kachasị kwụsie ike na ụfọdụ-atọ ndị ọzọ ngwa na mma ọrụ ahụmahụ.
Ejiri ngwa ọrụ egwuregwu agbakwunyere ọhụrụ maka ọnọdụ mgbanwe Fnatic. Ugbu a ị nwere ike ịhọrọ ọkwa atọ nke ọkwa: naanị ederede, rịba ama ma gbochie, naanị maka ahụmịhe egwuregwu gị.
Emeputara ohuru ngwa ngwa na obere windo maka Instagram na WhatsApp. (Kwado ya site na ịpụ site n'akụkụ aka nri / aka ekpe nke ihuenyo na ọnọdụ egwuregwu)
Ejiri atụmatụ mgbochi ezighi ezi gbakwunyere. Kwado ya, swipe gbadata site na elu ihuenyo ahụ, pịa na ebe ngosi ga-apụta.
Ngosipụta gburugburu ebe obibi
Gbakwunyere ihere ngosi mgbe niile On mma, gunyere Omenala dutọ oge / All Day nhọrọ. (Iji hazie: Nhazi> Ngosipụta> Ngosipụta gburugburu)
Ejiri ọhụụ elekere ọhụụ, ihe jikọrọ ya na Parsons School of Design. Ọ ga-agbanwe dị ka ekwentị gị ojiji data. (Iji hazie: Ntọala> Nhazi onwe> styledị elekere)
Agbakwunyela ụdị elekere ọhụrụ 10. (Iji hazie: Ntọala> Nhazi onwe> styledị elekere)
Gbakwunye hotkey maka ọnọdụ gbara ọchịchịrị, gbanye ntọala ọsọ ọsọ iji gbanye.
Nkwado na-akpaghị aka gbanye ọrụ ma hazie oge dị iche iche. (Iji hazie: Ntọala> Gosiputa> Ọnọdụ gbara ọchịchịrị> Onwe na-eteta> Na-eteta site na mgbede ruo ụtụtụ / oge ọdịnala)
Agbakwunyere isiokwu 5 (oke osimiri, ohere, ala ahịhịa, wdg) na oge ndị ọzọ.
Gụnyere njirimara otu na ọnọdụ Zen, ị nwere ike ịkpọ ndị enyi gị ugbu a ma mee ka ọnọdụ Zen dị n'otu.
A na-akwado ọrụ akụkọ, nke na-eme vidiyo vidiyo kwa izu na foto na vidiyo echekwara.
Kachasị loading ọsọ na preview oyiyi bụ ngwa ngwa.
Ngwaọrụ desktọọpụ nwere ike ifu efu. Enwere ike ịhazi ya dị ka ndị a: Pịa ogologo na desktọọpụ - "Ngwaọrụ" - "Ntọala" - Họrọ wijetị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Mmelite kwụsiri ike nke gam akporo 11 dabere na OxygenOS 11 na-amalite ịbịaru OnePlus 8 na 8 Pro
Tiktok na-enye ọdịnaya na-adịghị mma na nke rụrụ arụ dịka Pakistan si gbochie ya na mba ahụ